७ वर्षदेखि खुलेआम बेच्दै आएका यी ब्यक्ति, प्रहरीले काठमाडौँको ज्याठामा छापा मार्दा पक्राउ परे ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/७ वर्षदेखि खुलेआम बेच्दै आएका यी ब्यक्ति, प्रहरीले काठमाडौँको ज्याठामा छापा मार्दा पक्राउ परे !
काठमाडौं । विगत ७ वर्षदेखि गुणस्तरहीन मह उत्पादन गरेर देशका विभिन्न सहरमा विक्री गर्दै आएका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । महानगरपालिका वडा नं. २७ ज्याठा बस्ने नतिजा प्याकेजिङका सञ्चालक नर बहादुर श्रेष्ठलाई मिसावट गरी गुणस्तरहीन मह बनाइ रहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको हो ।
गुणस्तरहीन (डुब्लिकेट) मह बनाउनको लागि प्रयोग गरिने बिभिन्न प्रकारका सामाग्री, मेसिन, केमिकलहरु र गुणस्तरहिन ७ हजार ६ सय किलो तयारी तथा कच्चा मह समेत बरामद गरी कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा पठाइएको महानगरीय अपराध महाशाखाले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार उनले बिगत ७ बर्ष श्रीमती रस्मिला श्रेष्ठको नाममा नतिजा प्याकेजिङ सञ्चालन गरी गुणस्तरहिन मह बनाई बिक्री बितरण गर्दै आएका थिए । नतिजा प्याकेजिङको नाममा कम्पनि दर्ता गरी स्पर्स हनिको ब्राण्डमा मह विक्री गरेको पाइएको हाे ।
प्रहरीले प्राप्त सूचनाका आधारमा अप्रेसन हनी संचालन गरेको थियो । स्पर्स हनी खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, बबरमहल, काठमाण्डौमा परिक्षण गर्दा एचएमएफ र एफ जी रेसियोको मात्रा नेपाल सरकारको लागि तोकिएको अनिबार्य गुणस्तर अनुरुप नरहेको र मह खान योग्य नरहेको पाइएको हो ।
श्रेष्ठले गुणस्तरहीन मह काठमाडौं, भक्तपुर र पोखराका होटेल, रेष्टुरेण्टहरुमा थोक तथा खुद्रा बिक्री बितरण गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ दाङ, नवलपरासी र चितवनबाट खरिद गरी गुणस्तरही मह बनाई प्रति किलाे ६ सय ५०मा बिक्री बितरण गर्दै आएको बुझिएको छ ।
उनले सञ्चालन गरी आएको स्पर्स हनी भन्ने ब्राण्ड दर्ता समेत देखिदैन । मह बनाउनको लागि ३० प्रतिशत ग्लुकोज, ३० प्रतिशत चिनी र बाँकी ४० प्रतिशत मह बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मिसावट गरी बनाउने गरेको प्रहरीले खुलासा गरेको हो।
प्रहरीले श्रेष्ठबाट गुणस्तरहीन तयारी मह ६ सय किलो, कच्चा तथा गुणस्तरहीन मह ६ हजार ५ किलो, ग्लुकोज ५ सय किलो, चिनी एक सय किलो बरामद गरेको छ । त्यसैगरी वेट मेसिन, लेभल मेसिन, सिल मेसिन, पेट्राइज मेसिन, स्टोरेज मेसिन, स्पर्स हनीका लेभलहरु ( स्टिकर ) र पेट जार करीब १ हजार पिस बरामद गरिएको छ । उपत्यका र देशका विभिन्न स्थानमा नक्कली एवं गुणस्तरहीन मह बिक्री बितरण भैरहेको पाईएकोले सहज रहने प्रहरीले अपिल गरेको छ ।
सुतिरहेका श्रीमानलाई पा’पीहरुले जंगलमा लगेर मा’ रिदि’ए , श्रीमतीको हो’स् अझै खुलेन (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौंमा एकै परिवारका ५ जनाले आखिर किन गरे यस्तो गम्भीर निर्णय ?